Mogadishu Journal » Maxkamada ciidamada oo xukun riday
Mjournaal :-Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta dhagaysatay dacwad loo haysto lix ruux kuwaasoo lagu eedeeyay inay gacan siinayeen Mahad Xuseen Shiidow oo maxkamada dil toogasho ah hore ugu xukuntay.
Lixda eedeysane ayaa soo abaabulay weerar ay dad shacab ku dhinteen 28-ka bishii tegtay iyagoo gacan siinayay Mahad Xuseen Shiidow oo wade bajaajle ku dilay degmada Beledweyn ee gobalka Hiiraan.
Saraakiil ka socota maxkamadda ciidamada qalaba sida oo uu horkacayo guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xassan Cali Nuur Shuute ayaa Baladweyne u yimid baarista falalkii ka dhacay Baladweyne kadib markii la dilay Yaasiin Cali Saney.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa u gudbiyay maxkamadda eedda ka dhanka ah lixda eedaysane iyagoo soo bandhigay cadaymo laga qoray eedeysanayaasha, wuxuu sidoo kale Maxkamadda horgeeyay xafiiska xeer ilaalinta Markhaatiyaal deegaanka ah ee goobjoogga u ahaa dhacdada ay ku dhinteen Laba ruux midna uu ku dhaawacmay.
Ugu dambeyntii Xukunsanayaasha ayaa heysta fursad kale oo ay racfaan uga qaadan karan hadii aysan ku qancin xukunka.
Shir uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo oo mar kale lagu gacan seyray